Archive du 20191115
Edito Miara-mihetsika indray
Manambana hitaky ny tsy hikitihana ny torapasik’I Libanona ny ao Taolagnaro.
Soanierana Mbola tondra-drano ihany
Rotsak’orana nandritra ny ora iray latsaka dia efa niverina amin’ny laoniny indray ny tondra-drano eny Soanierana omaly hariva. Samy nahatsikaritra ireo rehetra nampiasa iny lalana iny
Varotra sy fanjifana Niaiky ny minisitra : “malemy ny fanjakana”
Natomboka omaly ary hifarana anio etsy amin’ny tranoben’ny varotra etsy Antaninarenina ny atrikasa fampiofanana momba ny fampanarahana fenitra ny varotra sy fanjifana eto Madagasikara.
Fifanakalozana ara-barotra amin’i Malaizia Maty antoka i Madagasikara hatreto
Tafakatra 85 tapitrisa dolara ny fanafarana entana nataon’i Madagasikara avy any Malaizia raha 5 tapitrisa dolara monja ny fanondranana tamin’ny taona 2018,
Zotra nasionaly Mitokona ireo taksibrosin’ny RN1, RN4, RN6
Nitokona ireo mpitatitra amin’ny zotra nasionaly mihazo ny lalam-pirenena voalohany, faha-4, ary faha-6 omaly, ka nivoaka ivelan’ny toby fiantsonana tetsy amin’ny Gara Maki Andohatapenaka.
Ady amin’ny kolikoly Hiara-kiasa ny JIRAMA sy ny BIANCO
Hiara-kiasa hiady amin’ny kolikoly manomboka izao ny orinasa JIRAMA sy ny birao mahaleo tena iadiana amin’ny kolikoly na ny BIANCO.
Fianarana any ivelany Firenena 4 no tena mahaliana ireo tanora Malagasy
Tena mahaliana ny tanora Malagasy, indrindra ireo vao afa-panadinana Bakalôrea ny hanohy fianarana any ivelany.